Rosia: Ireo tra-boina noho ny doro ala malahelo niady ho an’ny tranony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2010 5:10 GMT
Ao anatin'ny fandaharam-potoan'ny fantson'ireo haino aman-jery matanjaka ny tohin'ny afobe vao haingana teo tany Rosia. Tatitra mikasika sy resadresaka mivantana miaraka amin'ireo tra-boina, mpilatsaka an-tsitrapo, mpiasa ho amin'ny fanampiana amin'ny maha-olombelona ary ireo mpiasan'ny governemanta no tena endrika tsara mandrakotra ireo fivoarana: natsangana ny trano vaovao ho an'ireo tra-boina, takalo ara-bola no nomena ireo fianakaviana very trano tamin'ny afobe, akanjo sy fitaovana avy amina tolotra no nalefa ho an'ireo sisam-paty.
Fa miresaka mikasika ireo tra-boina “tsy be resaky” ny afobe ny tontolon'ny bilaogy : ireo izay niady ho an'ny tranony fahiny toy izay hoe hamela ny rehetra ka handao ireo tanànany.
Manoratra i Natalya Radulova ( mpampiasa LJ amin'ny solon'anarana radulova), mpanoratra ao amin'ny gazety malaza Rosiana mpivoaka isan-kerinandro “Ogonyok” [RUS], mikasika ireo olona ireo ao amin'ny bilaoginy mitondra ny lohateny hoe “Ireo izay tena mijaly noho ny afobe any Rosia “ [RUS]. Miaraka amin'ny finday misy fakan-tsary, nankany amin'ny vohitra kely Rosiana Yuzhny i Radulova ary niresaka tamin'ireo olona izay nifidy ny hamono afo ary hjanona ao amin'ireo tranony.
“Tsy taitra amin'ireo takalo ara-bola izy ireo,” hoy i Radulova nanoratra , “tsy nomena vola izy ireo , tsy hahazo trano vaovao ao amin'ny tanàna maoderina izy ireo . Mijanona mipetraka amin'ireo vohitra izay tsy misy herinaratra sady toerana ahitana trano vitsivitsy monja sisa tavela .”
Nanazava i Radulova fa manana fiainana tsaratsara kokoa noho ireo nanapa-kevitra ny hijanona ka hiady amin'ny doroala ireo olona izay nandao ny tanànany raha vao nanomboka ny afo :
Ity , ohatra, ny tanànan'i Yuzhny . Ity ohatra sisa no famoahan-tsetroka tavela tamin'ny trano may iray. Efa manangana trano vaovao ao amin'ny tanàna vaovao ry zareo ho an'ny tompony [-n'ilay trano may – GV] ka hanana entona izy ao, rano mafana, trano fandroana, toeram-pivoahana , sns . Efa nahazo takalo ara-bola ireo tompon-trano . Misafidy izay zavatra tsara indrindra avy amin'ireo bolongan'entana amin'ny fanampiana noho ny maha-olombelona izy ary manary ireo akanjo efa nanaovan'olon-kafa. Miaina any amina toby manokana izy, antsoin-dry zareo hoe “toeram-pialan-tsasatra” izany. Nasian'izy ireo fitaovana fanodinan-drivotra (climatiseurs) ho an'ny olona eny, omena sakafo in-telo isan'andro izy ireo, tolorana fanomezana maro izy ireo. Ary mahazo vola [ avy amin'ny governemanta – GV] i Vasya, ilay tsy an'asa hatrizay ary mankany amin'ny toeram-pivarotana lehibebe iray ka misotro divay taorian'ny nandaozany ireo osiny, ireo sakany sy ny alikany. Tena niova tanteraka ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainany..
Lavidavitra kokoa, afaka mahita tranon'olona iray izay niady tamin'ny doroala nandritra ny alina manontolo ianao hany ka lasa mena ny masony. Miaina ao anatina tanàna maty izy ankehitriny, faitra izay notapahan-dry zareo avy hatrany ny herinaratra ary nakatona ireo toeram-pivarotana lehibebe. “Iza no nahalala hoe tena halala-tànana ny governemantantsika ? Nihevitra isika fa ho toy ny mahazatra ny zavatra rehetra ary ho tompon'andraikitra amin'ny fanorenana ny tranontsika isika. Izany no nanosika ny ankamaroan'ireo olona nikiry niaro ireo tranony tamin'ny afo ary ireo zokinjokiny sy ireo mamo lava sy ireo tsy miasa saina no niala avy hatrany .” Tsy maintsy hiatrika ny ririnina izy sy ny fianakaviany ao amina tanàna izay tsy hisy olona hanadio ny làlana amin'ny ranomandry. Maninona ny làlana no ho diovina ho an'ny mponina roa fotsiny?
Ny resadresaka manodidina ilay lahatsoratra dia mifantoka manodidina ny fiparitahan'ny fahantrana any amin'ireo tanànan'i Rosia sy ireo ezaka tsy mitovy ataon'ny governemanta ho an'ireo tra-boina tamin'ny afo. Nanoratra , ohatra, ny mpampiasa LJ bolshoi_zaitz, [RUS]:
Mihevitra aho fa tokony nomen'izy ireo takalo ara-bola ny olona REHETRA, ireo olona any amin'ireo tanàna may rehefa voakasika amin'ny doro ala izy ireny. Ka afaka hahatakatra tsara ireo izay niezaka hanavotra ny tranony fa tsy niasa maina izy ireo. Ary mila soloina takalony ara-bola izany. Dia ho afaka hanasonia taratasy fifanarahana ho fananganana trano vaovao izy ireo. Mazava ho azy, mila fehezin'ny lalàna izany, mila asiana fe-potoana farany, sns . […] Raha tsy izany, dia mandrisika ny fitongilanana ho mamo lava isika noho ireo zavatra omena maimaim-poana.
Mpampiasa iray hafa, pr_woland, no maneho ny manahirana azy [RUS] fa tsy hijanona hatreo akory ny korontana:
Aza adino fa vola be no angalarin'ny olona sy fotsiany lazaina fa noho ny doroala. Tsy ireo tra-boina, mazava ho azy, fa ireo napetraka amin'ny seza hoditra ho tompon'andraikitra amin'ny fitsinjarana.
. Mpampiasa maromaro ihany koa no mitaraina any anaty tsikera fa nisy nangalatra na nomena ireo olona izay tsy mila na tsy voakasiky ny doroala akory ireo fanampiana noho ny maha-olombelona natao ho an'ireo tra-boinan'ny doroala. Maneho ireo manahirana azy ihany koa ny olona mikasika ireo trano vaovao naorina ho an'ireo tra-boina. Ireo mpampiasa LJ dia matoky tanteraka fa amboarina amin'ny fomba kitoatoa ireo tranobe vaovao ary tsy hanara-penitra mifanaraka amin'ny hamafin'ny hatsiakan'ny ririnina Rosiana izany.
” Maneho, ireo lahatsoratry ny bilaogy sy ireo fihetseham-pon'ireo mpitoraka bilaogy, fa tsy olona maro no matoky fa hizotra amin'ny tena izy sy ho ara-drariny ny fitsinjarana ireo ezaka hanampiana ireo tra-boina noho ny doro ala . Nefa na dia eny anivon'ireo tsikera tena ratsy aza, mbola misy toerana ho an'ny tsiri-panantenana Rosiana ihany. Manoratra mankahery [RUS] i nikolo_m, mpampiasa LJ, fa “ireo izay tsy nirehitra tamin'ity taona ity mety hiova ho may amin'ny taona manaraka ary tsy mazava hoe iza no ho tsara vintana .”